Published October 15, 2020 at 10:58 PM CDT
Faafida waxaa laga soo sheegey 61 xarumood oo daryeel waqti dheer ah, oo ay ka mid yihiin 13 waqooyi-galbeed Iowa iyo afar ka tirsan Degmada Woodbury.
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegtay inay rumeysan tahay in taxaddarrada amniga ee saxda ah loo qaaday si looga hortago faafitaanka COVID-19 intii lagu guda jiray isu soo baxa ololaha madaxweyne Donald Trump.
Dhacdadan oo lagu qabtay banaanka garoonka diyaaradaha ee Mo Moines fiidnimadii Arbacada ayaa soo jiidatay kumanaan kun.
Gov Reynolds wuxuu leeyahay Iowans waxay xaq u leeyihiin inay si nabad ah isugu yimaadaan.
Dad badan oo ka mid ahaa dadkii banaanbaxa dhigaayay ma aysan xirneyn waji-duub ama ku dhaqma kala fogaynta bulshada Sida ku xusan bayaanka degdegga ah ee caafimaadka bulshada Reynolds, isu imaatinno ballaaran oo ka badan 10 qof ayaa la oggol yahay, haddii qabanqaabiyaha uu hubiyo ugu yaraan lix fiit masaafada u dhexeysa koox kasta.
Badhasaabka South Dakota Kristi Noem ayaa soo galay ololihii ololaha ee New Hampshire, isagoo sameeyay muuqaalo isagoon xidhnayn maaskaro, xitaa iyada oo gobolkeedu goob joog u ahaa meel sare oo kiisaska ah. Kiisaska firfircoon waxay kor u kaceen 7,000 markii ugu horreysay Koonfurta Dakota iyo isbitaallada la geeyay meel sare oo sare maalintii saddexaad ee isku xigta.
Nebraska waxay soo tabisay ku dhowaad 1,000 kiis oo cusub. Dhakhaatiirta ku sugan meelaha miyiga ah ayaa walaac ka muujinaya heerka sare ee infekshinka guud ahaan gobolka. Heerka waxtarka ee Nebraska ayaa kaalinta lixaad kaga jira wadanka. In ka badan 54,000 xaaladood oo wanaagsan ayaa ka jirey Nebraska iyo 530 dhimasho.
Toddoba iyo toban kale oo Iowans ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-1 muddo 24-saac ah. Waxaa jiray ku dhowaad 600 kiis oo cusub oo wanaagsan oo ah…
Isbitaalada cosbitaalada 'COVID-19' waxay kusii kordhayaan Iowa, iyagoo garaacaya rikoor maalinle ah.Gobolka oo dhan waxaa jiifa 473, oo ay ku jiraan 63…